Galmudug iyo Maamulka Gobollada Dhexe oo heshiis midnimo ku kala saxiixday Muqdisho+(Sawirro) | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Galmudug iyo Maamulka Gobollada Dhexe oo heshiis midnimo ku kala saxiixday Muqdisho+(Sawirro)
Galmudug iyo Maamulka Gobollada Dhexe oo heshiis midnimo ku kala saxiixday Muqdisho+(Sawirro)
Muqdisho, Disembar 06, 2017: Dowlad Goboleedka Galmudug iyo Maamulka Gobollada dhexe ee Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa heshiis taariikhi ah oo ay ku midoobayaan ku kala saxiixday xarunta Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Madaxda Galmudug iyo Ahlu Sunna Waljamaaca oo ku heshiiyey 14 qodob ayaa ku boggaadiyey Dowladda Federaalka Soomaaliya dadaalkii dheeraa ee ay ku bixisay xallinta khilaafka u dhexeeyey, iyagoona muujiyeey sida ay uga go’antahay ka-mira-dhalinta dadaalkas.
“Heshiskan aad iyo aad ayaan u soo dhawaynayaa, waana ku mahadsantahay dowladdu. Maanta kahor garoowshiyo ma helin, waxaanse leeyahay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Beesha Caalamka waa in midnimada maanta ay garoowsho ku siiyaan Galmudug.“ ayuu yiri Madaxweynihii Maamulka Gobollada dhexe ee Ahlu Sunna Waljamaaca Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xassan.
Madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in uu u tanaasulay midnimada gobollada Gal-madug iyo in laga gudbo khilaafka soo jireenka ah ee rakaadiyey horumarka Galmudug.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambaliyeeyay maamulka iyo shacabka Galmudug heshiiskan taariikhiga ah, isagoona ugu baaqay Madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelle iyo Sheekh Maxamed Shaakir Cali ina ay u hoggaansamaan qodobada heshiskan, si buuxdana uga wada shaqeeyaan hirgelintiisa.
Previous article“AKHRISO” qodobada heshiiska Muqdisho ay ku kala saxiixdeen Galmudug iyo Ahlusunna Waljamaaca
Next articleMadaxweynaha Mareykanka oo ku dhawaaqay in Qudus ay tahay Caasimadda Israel